पूटलियन कुकुर जातको जानकारी र चित्रहरु - कुकुरहरु
इटालियन ग्रेहाउन्ड / पुडल मिश्रित जात कुकुरहरू
ओस्लो, नर्वेबाट १ 16 महिना पुरानो जिप्पी द पूटालियन (इटालियन ग्रेहाउन्ड / पुडल मिक्स) — 'उनी एक छिटो धावक हुन् र छिट्टै चीजहरू सिक्छन्।'
पट्टलियन शुद्ध कुकुर होईन। यो बीचको क्रस हो इटालियन ग्रेहाउन्ड र Poodle । मिश्रित जातको स्वभाव निर्धारण गर्न उत्तम तरिका भनेको क्रसमा सबै नस्लहरू हेर्नु र तपाईंलाई कुनै पनि नस्लमा फेला परेका कुनै पनि सुविधाहरूको कुनै संयोजन प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर जान्नु हो। यी सबै डिजाइनर हाइब्रिड कुकुरहरू उत्पादन गरिंदैन 50०% शुद्ध प्रजननको 50०% शुद्ध प्रजनन हुन्। यो प्रजनकका लागि प्रजननको लागि धेरै सामान्य छ बहु-पुस्ता पार ।
बॉर्डर कोक्ली बक्सर मिक्स पिल्पीहरू
'यो मेरो कुकुर कोको हो करीव १ बर्षको उमेरमा। उहाँ एक इटालियन ग्रेहाउन्ड / पुडल मिक्स हुनुहुन्छ (पूटेलियन जसरी हामीलाई भनिएको थियो)। ऊ धेरै मित्रैलो छ तर धेरै सुरक्षात्मक पनि छ। उसलाई यो मनपर्दैन जब मान्छे मा सबै लड़ाई !! ऊ आफ्नो लामो खुट्टा संग दौडन मन पर्छ !! उसलाई पनि ल्याउन मन पर्छ !! कहिलेकाँही उनी शरारत हुनेछन् र फोहोरमा पस्नेछन्। त्यो उसको खराब बानी हो। ऊ आफ्नो सानी 'बहिनी' जस्टिससँग राम्रोसँग जान्छ जो एक हो चिहुआहुआ । उनीहरू खेल्न मन पराउँछन् !! ऊ न्यायलाई घृणा गर्न मनपराउँछ ... कहिले काहिँ ऊ बौलाहा हुन्छे। कोकोसँग मसँग धेरै ऊर्जा छ हिंड्नको लागि उसलाई लिनुहोस् प्राय: हामीले उसलाई एक उद्धारबाट पायौं। त्यहाँको आइमाईले हामीलाई बताइन् कि उनी जाडोमा झन्डै जमेको सडकको छेउमा फेला परे। हामी सोच्छौं कि उसले पहिले दुर्व्यवहार गरेको हुन सक्छ किनकि जब कहिलेकाहिँ तिमी उसलाई पाल्तु जान जान्छौ। ऊ अहिले राम्रो छ। हामी उहाँलाई भेट्यौं कि धेरै खुसी छौं !! '
'यो १ile महिना पुरानो रिले पोतील्यान हो। ऊ एक व्यक्तिको कुकुर हो, यद्यपि ऊसँग केहि अन्य मानव साथीहरू छन्। धेरै मायालु, कोमल र समयमै कुराकानी गर्ने। ऊ चाबुक जस्तै छिटो छ र बाहिर खेल्दा 'यदि तपाईं सक्नुहुन्छ भने मलाई समात्नुहोस्' खेल्न मनपर्दछ। ऊ बौद्धिक छ र धेरै छिटो सिक्छ। उहाँ अन्य कुकुरहरूलाई माया गर्नुहुन्छ, उनीहरूको आकारको पर्वाह नगरी र खेलको घण्टाको आनन्द लिन्छ। उसको एक बर्षको भेट भयो, करिब एक बर्ष पुरानो। ऊसँग अन्य कुनै स्वास्थ्य समस्या छैन। ऊ एकदम राम्रो र वफादार घरपालुवा जनावर हो। '
ओस्लो, नर्वेबाट १ months महिना पुरानो जिप्पी द पूटालियन (इटालियन ग्रेहाउन्ड / पोडल मिक्स ब्रीड कुकुर)
खैरो र सेतो अंग्रेजी बुलडग
इटालियन ग्रेहाउन्ड मिक्स ब्रीड कुकुरहरूको सूची
पोडल मिक्स ब्रीड कुकुरहरूको सूची
सेतो ल्याब र गोल्डन रिट्रीभर मिक्स
अमेरिकी रिंगटेल बिरालो बिक्री को लागी
पहेंलो ल्याब र बेससेट हाउन्ड मिक्स
पिटबुल क्यान कोर्सो मिक्स पिल्पीहरू
भाग प्रयोगशाला भाग पिट बुल
जापानी चिन र प्लेन मिक्स